Iska diiwaangeli (bilaash ah)
Goob Shaqo iyo Bulsho Onleen ah
loogu talagalay Xirfadlayaasha Luuqadeed
In kabadan 1,122,281 turjubaanno iyo shirkado turjumaan oo xirfadlayaal ah
Shaqaaleysii turjubaan iyo shirkad turjumaan oo xirfadlayaal ah
Soo dheji shaqo turjumid ah
Iska diiwaangeli (bilaash ah) Gal
Baro waxyaalaha muhiimka ah ee ProZ.com
Sababtoo ah ProZ.com wuxuu leeyahay hadaf ka duwan
Ujeeddada ProZ.com waa in la bixiyo qalab iyo fursado ay turjubaannada, shirkadaha turjumaada, iyo kuwa kale ee ka shaqeysta warshadaha luqadda ay u isticmaali karaan in ay: shabakad samaystaan, ay ku ballaariyaan ganacsigooda, ay ku horumariyaan shaqadooda, iyo in ay farxad dheeri ah kala kulmaan dadaalkooda shaqo.
Ahmiyad siinta dadka iyo shaqada ay qabanayaan ayaa ka dhigaysa ProZ.com meel gaar ah oo waxtar u leh dadka shaqo-bixiyaasha ah si ay ula kulmaan turjubaano madax-bannaan iyo shirkadaha turjumaadda oo karti leh. Bogag badan oo kale ayaa keliya ka kooban liis ay ku jiraan macluumaad shakhsiyeed.
Isdiiwaangelintu waa bilaash, wax cadeyma ahna looma baahna
Raadi howlo bulsheedka iyo ilaha kala duwan ee xirfadlayaasha luqadda ay ka heli karaan ProZ.com.
Turjubaano xirfadeysan oo la ansixiyey
Raadi oo la shaqeey shirkadaha aaminka ah
Bixi ama hel turjumaadaha ereyada (erey-bixino)
Hormar dhanka xirfada ah
Tababar ku saabsan turjumaada iyo ganacsiga
Madalo ku saabsan dhowr mowduucyo oo xirfadaha ah
Si fiican u shaqee adigoo haysta ereyo badan
Shirarka onlaynka ama offlaynka ah
Tartamo iyo Abaalmarino
Kaqeybgal tartamada tarjumaadda
Qiima dhmis ka hel qalabyada sida SDL Trados
S. Maxaa ka dhigaya ProZ.com mid gaar ah?
J. Hanaanka xubinnimada ProZ.com. Halkaan waxaa ku qoran sababta…
Iyadoo la waafajinayo bayaanka himilada ProZ.com, xulashooyinka xubinnimada lacagta lagu bixiyo ayaa loo heli karaa turjubaanada iyo turjumaanada xirfadlayaasha ah, iyo sidoo kale shirkadaha turjumaada, iyo faa'iidooyin kale oo badan oo laga helo bulshada.
Xubinnimadu waxay fursad kuu siisaa qalabyo iyo adeegyo la xoojiyay, oo si gaar ah loogu sameeyey in lagu kobciyo ganacsiga iyo bilaabida xirfadaha shaqo
Dhammaan adeegyada ku jira ProZ.com waxay faa'iidooyin badan u horseedaan xubnaha lacagta bixiya. Tusaale ahaan, ku daritaanka liiska mudnaanta iyo helitaanka aan xadidnayn ee macluumaadka maareynta halista kuwaas oo laga heli karo diiwaanada 'Blue Board'.
Xubinnimadu waxay kuu oggolaaneysaa inaad marin toos ah, oo bilaash ah u hesho turjubaannada iyo shirkadaha tarjumaadda
Hanaanka xubinnimada gaarka ah ee ProZ.com waxay ka dhigan tahay markii shirkadaha turjumaada iyo adeeg-bixiyeyaasha ay ku kulmaan ProZ.com, labada dhinacba ma jiro qof laga qaadayo wax lacag ama khidmad ah. La kulan macmiil ama adeeg-bixiye, xiriirkuna waa xagiina, lama khidmadeeyo, weligiis.
Qof kastaa wuu ka faa'iideystaa, taas oo keenta kalsooni joogto ah iyo koritaan loogu talagalau bulshada ku lug leh warshadaha luuqadda
Faa'iidooyinka loo gudbiyo xubnaha iyo iibsadayaasha turjumaadda ayaa sii wadaysa inay door toos ah ka cayaarto guusha joogtada ah ee ProZ.com inay noqoto xarun bulsheedka onlaynka ah ee loogu aaminaada badan yahay, ee ugu weyn caalamka halkaasoo xirfadlayaasha luqaddu ay si xor ah u sameysan karaan xiriirro hufan oo furan.
Ma tahay turjumaan madaxbanaan ama shirkad tarjumaad?
Fiiro degdeg ah oo lagu sameeyo Proz.com
& tababarada ProZ.com
Shaqooyinka turjumaada ugu dambeeyey ee la soo dhejiyey:
English to Japanese, about Christian Biblica,Trados
845,980 wadarta shaqooyinka ayaa la soo dhejiyey
Su'aalaha turjumaada ugu dambeeyey la isku warsaday toos KudoZ:
3,772,633 su'aalaha turjumaada ayaa la weydiiyey
Madasha dooda ee dhawaan::
1,443,826 madalood ayaa wadar ahaan la qabtay
9,537 munaasabado ayaa la qabtay illaa iyo hadda
Wararka turjumaada ee ugu dambeeyey: